Juventus oo war farxad leh haleysa ka hor kulankeeda habeen dambe ee Champions League – Gool FM
JUVENTUS STADIUM, TURIN, ITALY - 2016/12/17: Andrea Barzagli (left), Daniele Rugani and Giorgio Chiellini of Juventus FC celebrates at the end of the Serie A football match between Juventus FC and AS Roma. Juventus FC wins 1-0 over AS Roma. (Photo by Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images)
(Torino) 21 Feb 2017. Naadiga lagu naaneyso Marwada Duqda ah ee Juventus ayaa helaysa war farxad leh ka hor kulanka ay habeen dambe u safri doonto kooxda FC Port tartanka Champions League.
Subaxan ayaa la warinayaa inay tababarka ku soo laabteen daafacyada khibrada badan ee kooxda reer Talyaani Andrea Barzagli iyo Giorgio Chiellini.
Labada daafac ayaa shaki laga muujinayay taam ahaanshahooda lugta hore ee wareega 16-ka CL iyadoo uu tababare Massimiliano Allegri sheegay inuusan khatar galin doonin daafaciyadiisa haddii ay si buuxda taam ugu noqon kulanka.
Bianconeri ayaa Caselle airport uga duuli doonta Oporto saacada dhankooda marka ay tilmaameyso 15.20, Allegri iyo kabtan Buffon ayaa iyana lagu soo dhaweyn doonaa shirka jaraa’id marka ay saacadu tahay 18.45.
Kooxaha Ciidanka qalabka sida ee Heegan iyo Horseed oo guulo ka gaaray Dekedda iyo Waxool